အားပါးပါး !!! ပုရိသတွေ ရဲ့ အသဲကို ချွေလိုက်တဲ့ မိုးမြင့်သဇင် ရဲ့ ပုံရိပ်များ – Shwe Yoe
အားပါးပါး !!! ပုရိသတွေ ရဲ့ အသဲကို ချွေလိုက်တဲ့ မိုးမြင့်သဇင် ရဲ့ ပုံရိပ်များ
ပရိသတ်ကြီးရေ ပုရိသတွေရဲ့ အသည်းစွဲ မော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ် တဲ့ မိုးမြင့်သဇင်ကို သိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ သူမရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုံးလေးနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှတွေက ပုရိသတွေကို ဆွဲဆောင်နေတဲ့ ထူးခြားမှုတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျ အမိုက်စားပုံလေးတွေဟာ ဆိုရင်လည်း ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ရေပန်းစား လူကြိုက်များတာ လည်းတွေ့ရပါတယ်။
သူမကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆက်လက် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး အောင်မြင်ပြီး ပရိသတ်ချစ်တဲ့ မော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်အောင် အကောင်းဆုံး ကြိုးစားနေတာကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုဖက်ရှင်လေးတွေပဲ ဝတ်ဝတ် တစ်နေ့တစ်ခြား ပိုပြီး ထူးခြားလှပလာတဲ့ မိုးမြင့်သဇင်က ပုရိသတွေရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုကို အပြည့်အဝ ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။အမိုက်စားကောက်ကြောင်းလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် မိန်းကလေး ပရိသတ်အများစု အားကျချစ်ခင်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲဆက်ဆီ ကျကျ အမိုက်စား ပုံရိပ်တွေကို လူမှုကွန်ယက်ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် အများဆုံး တင်လေ့ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။သူမဟာ လတ်တလောမှာတော့ ရေကူးကန်ထက်က အမိုက်စားလှရက်လွန်းနေတဲ့ အလန်းစား ပုံလေးတွေကို ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ကဲ….ချစ်ပရိသတ်ကြီးတွက် မိုးမြင့်သဇင် ရဲ့ လှသွေးကြွယ်နေတဲ့ အမိုက်စားပုံလေးတွေကို မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်။
ပရိသတျကွီးရေ ပုရိသတှရေဲ့ အသညျးစှဲ မျောဒယျတဈဦးဖွဈ တဲ့ မိုးမွငျ့သဇငျကို သိကွမယျထငျပါတယျနျော။ သူမရဲ့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ အပွုံးလေးနဲ့ ခန်ဓာကိုယျကောကျကွောငျးအလှတှကေ ပုရိသတှကေို ဆှဲဆောငျနတေဲ့ ထူးခွားမှုတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။သူမရဲ့ ဆကျဆီ ကကြ အမိုကျစားပုံလေးတှဟော ဆိုရငျလညျး ဖဘှေ့တျစာမကျြနှာပျေါတှငျ ရပေနျးစား လူကွိုကျမြားတာ လညျးတှရေ့ပါတယျ။
သူမကတော့ အနုပညာအလုပျတှကေို ဆကျလကျ လုပျကိုငျလကျြရှိပွီး အောငျမွငျပွီး ပရိသတျခဈြတဲ့ မျောဒယျတဈဦးဖွဈအောငျ အကောငျးဆုံး ကွိုးစားနတောကို မွငျတှရေ့မှာဖွဈပါတယျ။ ဘယျလိုဖကျရှငျလေးတှပေဲ ဝတျဝတျ တဈနတေ့ဈခွား ပိုပွီး ထူးခွားလှပလာတဲ့ မိုးမွငျ့သဇငျက ပုရိသတှရေဲ့ အားပေးဝနျးရံမှုကို အပွညျ့အဝ ရရှိထားတာဖွဈပါတယျ။အမိုကျစားကောကျကွောငျးလေးကို ပိုငျဆိုငျထားတာကွောငျ့ မိနျးကလေး ပရိသတျအမြားစု အားကခြဈြခငျနကွေတာလညျးဖွဈပါတယျ။
သူမရဲဆကျဆီ ကကြ အမိုကျစား ပုံရိပျတှကေို လူမှုကှနျယကျဖဘှေ့တျပျေါတှငျ အမြားဆုံး တငျလရှေိ့တာတှရေ့ပါတယျ။သူမဟာ လတျတလောမှာတော့ ရကေူးကနျထကျက အမိုကျစားလှရကျလှနျးနတေဲ့ အလနျးစား ပုံလေးတှကေို ဖဘှေ့တျစာမကျြနှာပျေါတှငျ ဖျောပွထားတာတှရေ့ပါတယျ။ကဲ….ခဈြပရိသတျကွီးတှကျ မိုးမွငျ့သဇငျ ရဲ့ လှသှေးကွှယျနတေဲ့ အမိုကျစားပုံလေးတှကေို မြှဝပေေး လိုကျပါတယျ။
သူနာပြုတွေကိုဝေဖန်ထား တဲ့ သူမ ရဲ့စာသားကြောင့် လူပြောများနေ တဲ့ မိုးယုစံ
“အရေးပေါ်အောက်စီဂျင် လိုအပ်နေ တဲ့ လူနာ ကို ကူညီရင်း ကိုဗစ်ပိုးကူးဆက်ခံရတယ်ဆို တဲ့အဆိုတော်ယုန်လေး”
ကမ်းခြေက ညို့အားပြင်းပြင်း ဆက်ဆီကျကျ ရိုက်ထားတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာ ရဲ့ ပုံရိပ်များ
ကမ်းခြေကလှိုင်းလုံးကြီးများအလားထင်မှားရအောင်အောင် လမ်းလျောက်ပြလိုက်တဲ့ မအေးသောင်းရဲ့ ဗီဒီယိုလေး